ह’त्या भएको दिन भुपेन्द्रसगै गएका दिपेशको बयान, सुन्दै ड’र’म’र्दो ! यसरी मा’रे’छ्’न (भिडियो हेर्नुस) - ABNews Nepal
धर्म/संस्कृति प्रविधि मनोरञ्जन विचार समाचार समाज स्वास्थ्य
ह’त्या भएको दिन भुपेन्द्रसगै गएका दिपेशको बयान, सुन्दै ड’र’म’र्दो ! यसरी मा’रे’छ्’न (भिडियो हेर्नुस)
Nov 28, 2021 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, Bhupendra Karal, latest news chitwan, latest news nepal, nepali samachar, taja khabar nepal, tajakhabar
पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा निकै त’ह’ल्का पिटिरहेको घटना हो टिकापुरमा भएको भुपेन्द्र कटुवालको हत्याको घटना । घटना घटेको आज १७ दिन बितिसक्दा पनि यस घटनाबारे बास्तबिकता र सत्यतथ्य पत्ता लाग्न सकिरहेको अबस्था छैन । भाइटिकाको तिनदिनपछि कार्तिक २३ गते ह’त्या गरिएका भुपेन्द्र मात्र २३ बर्षका थिए । यो घटना दिनप्रतिदिन झन र’ह’स्य’म’य बन्दै गएको छ । यस घटना आफ्नै आखाले देख्ने दिपेश न्यौपाने आज मिडियामा आएका छ्न ।
कपिल श्रेष्ठ नाम गरेका भुपेन्द्रका साथिले आफु खतरा रहेको र आफ्नो पछाडी केही ब्यक्तिको समूहले आफुलाइ ल’खे’टे’को भन्दै भुपेन्द्रलाई उनले बारम्बार फोन गरिरहेका थिए । त्यतिबेला साझको झण्डै ६ बजेको थियो । कपिलले फोन गरेर बोलाएपछी भुपेन्द्रको साथमा दिपेश पनि उनिसगै गएका थिए । भुपेन्द्रलाइ निरन्तर फोन गरेर बोलाइरहदा कपिल भने टिकापुरमा लु’के’र बसिरहेका रहेछ्न ।
त्यतिनै बेला भुपेन्द्रको बाइकमा तेल सकिएको थियो तर कपिलले साथिको लागि जाबो एउटा तेल हालेर आउन सक्दैनस भनेपछी साथिको वचन टाल्न सकेनन भुपेन्द्रले । हु’इ’के उनी साथी भए ठाउ तर बिचरा उनलाइ के थाहा कि आफ्नै साथिले उनलाइ मार्ने ष’ड्य’न्त्र रचिरहेको छ भनेर । कपिलले बोलाएको लोकेसन पत्ता लाग्न सकेन ।
लोकेसन खोज्दै जादा उनिहरुमाथी यस्तो बि’प’त आ’इ’ला’ग्यो कि त्यसैबखत ठिक अगाडि नबिनका केटाहरु भेट्टिए र उनिहरु भुपेन्द्रको बाइकको पि’छा गर्न थालेछ्न र भुपेन्द्रले मामाको घर आएपछी दिपेशलाई रोक्न लगाएकोमा त्यहिनेर उनिमाथी आ’क्र’म’ण भएको र दिपेश भने झा’डिमा लु’के’र ज्या’न जोगाउन सफल भएका रहेछ्न ।
कपिलले खोजेको लोकेसनमा उसलाइ नभेटेपछि भुपेन्द्रले उनलाइ सिद्धार्थमा बोलाएको कुरा दिपेशले खुलाए । नवीन रावलले बाइक कुदाउदा कु’दा’उ’दै रो’के’का रहेछ्न भुपेन्द्रलाइ तर उनी सिद्धार्थ होटल जसको नजिकै उनको मामाघर थियो त्यहासम्म पुगेछ्न तर फेरीपनि आर्यन नाम गरेको एउटा युबकले उनलाइ गेटभित्र लगेछ र उनिमाथी सबैजना ख’न्हि’ए’को कुरा उनले बताए । दिपेशलाइ भने केहिपनि गरेनछ्न उनिहरुले र उनी त्यहाबाट भा’गे’छ्’न पनि ।
७ ८ वटा बाइकमा पि’छा गरेका रहेछन भुपेन्द्रको, १० जना भन्दा बढी मानिसको समूह रहेको बताउछ्न उनी । घटना स्पष्ट नदेखेको तर भुपेन्द्रको ची’त्का’र सुनेको बताउछ्न उनी । भुपेन्द्रले ब’चा’उ ब’चा’उ, मामा नमार्नुस, मामा नाइ मामा भन्दै हा’र’गु’हा’र पनि मा’गे’का रहेछ्न । उनले भुपेन्द्र दाइ एकदमै मज्जको, झ’ग’डा नगर्ने, सबैलाइ खुसि पार्ने र हासो मज्जाक गर्ने खालको मान्छे रहेको कुरा पनि बताए । नवीन रावलले ब’न्दु’क खु’कु’री देखाएर भुपेन्द्रलाइ आफ्नो समुहमा ल्याउन खोजेको बताउछ्न उनि ।
भुपेन्द्रको बिदेश गएर उतै बिजनेस गर्ने योजना भएको कुरा पनि उनले खुलाए । कपिल् भुपेन्द्रका बच्चैदेखिको साथी रहेछ । भुपेन्द्रकि आमाले भने आफ्नो छोरोलाइ मामाघरमा नभएर अर्कै घरको गेटमा ल्याएर मा’रे’को कुरा खुलाइन । आफुले दाजुलाइ सामान्य चो’ट’प’ट’कमात्र लागेको होला भन्ने सोचेकोमा यस्तोसम्म भएछ भन्दै नि’न्या’उ’रो मुख लगाउछ्न उनि ।
भुपेन्द्रलाई कसरी र किन मा’रि’यो ? को हुन नवीन रावल ? आमाबुबाले रुँदै सुनाए काहानी (भिडियो सहित)
उपचार गराउदा चम्सुरी घर बेच्ने अवस्थामा आइन् ,पानी नपिएको ५ महिना भयो